‘हटेस्ट भेजेटरियन्स अफ २०१८’ बने यी दुई नायक नायिका !! - Experience Best News from Nepal
‘हटेस्ट भेजेटरियन्स अफ २०१८’ बने यी दुई नायक नायिका !!
इम्तियाज अलिको चलचित्रमा सारा र कार्तिक एक साथ पहिलो पटक देखिने
बिहेको मूडमा मलाईका, गर्दैछिन माल्दिप्स यसरी शीर्षासन ! फोटो फिचर
१० तस्विरमा हेर्नुहोस् भारतकै सर्वाधिक महंगो फिल्म कसरी शुटिङ गरिएको थियो ?
७ वर्षपछि फेरि ‘राउडी राठौर’ बन्दै
Aryan KartikBollywoodParineeti Chopra
म्याडम तुसादमा प्रियंकाको मैनको स्ट्याच्यू
फेरी कृतीको अर्ध नग्न तस्बिरले वलिउड तातियो !! माल्दिभ्समा विकिनमा देखिईन सानोन (तस्बिरहरुमा)
जान्वीको बेली डान्समा दर्शकको ताली भन्दा गाली धेरै !! किन विवादित बन्यो उनको बेली डान्स